Little Women (2019) – Burmese Subtitle
Little Women 25 December 2019
PG 2019 135 min Drama, Romance
IMDB: 7.9/10 99,550 votes
Bob Odenkirk, Eliza Scanlen, Emma Watson, Florence Pugh, James Norton, Laura Dern, Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Tracy Letts
Won 1 Oscar. Another 72 wins & 185 nominations.
ဒီတစ်ခါတော့ စူပါဟီးရိုးတွေ၊ ဆန်းပြားတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ၊လှည့်ကွက်တွေဆိုတာတွေကို မေ့ပြီးအရိုးရှင်းဆုံး အလှပဆုံးလေး ခံစားကြည့်ရအောင်။Little women ဆိုတာက ၁၈၆၈ နဲ့ ၁၈၆၉ မှာ အမေရိကန်စာရေးဆရာမကြီး လူဝီဆာ မေ အဲကော့ က ၂ ပိုင်းခွဲပြီး
ရေးသားခဲ့တဲ့ တကယ့် ဂန္ဓဝင်လက်ရာပါပဲ။
မာ့ချ် မိသားစုရဲ့ ညီအစ်မလေးယောက် ( မက်ဂ်၊ ဂျို၊ ဘက်သ် နဲ့ အေမီ) တို့ရဲ့ကလေးဘဝကနေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိ ဇာတ်လမ်းကို ရေးဖွဲ့ထားတာပါပဲ။စာရေးသူနဲ့ သူ့ရဲ့ ညီအစ်မ ၃ ယောက်အပေါ်ကို အခြေခံထားတာမို့Semi-autobiography လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ဇတ်လမ်းကတော့ လေရူးသုန်သုန် တို့ စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့လိုလူဘဝတွေအကြောင်းကိုအေးအေးဆေးဆေး လှလှပပလေး ဖော်ကျူးထားတာပါပဲ။
မိသားစုတွေ၊ လူငယ်တွေကြားက အချစ်တွေ၊ရုန်းကန်မှုတွေ၊ ဘဝအပြောင်းအလဲတွေအကြောင်းပါပဲ။တကယ်ကို ပျော်ဝင်သွားပြီး ခံစားချက်အစုံရမယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါ။Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh,Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothee Chalamet, Meryl Streep နဲ့အခြား ဆရာ့ဆရာကြီးတွေပါဝင်ထားပါတယ်။cast နာမည်နဲ့တင် ဖျားလောက်စရာကောင်းသလိုအော်စကာ ၆ ဆု ဆန်ကာတင်တာလည်းလွန်တယ်မထင်ပါဘူး။
Bob Odenkirk Eliza Scanlen Emma Watson Florence Pugh James Norton Laura Dern Meryl Streep Saoirse Ronan Timothée Chalamet Tracy Letts
Abby Quinn Adrianne Krstansky Ana Kayne Anthony Estrella Bill Mootos Bob Odenkirk Charlotte Kinder Chris Cooper Daniel O'Shea Dash Barber David J. Curtis Edgar Damatian Edward Fletcher Eliza Scanlen Emily Edström Emma Watson Eowyn Young Erin Rose Finola Weller Baldet Flannery Gregg Florence Pugh Hadley Robinson Harper Pilat J.M. Davis James J. LaBonte James Norton Jayne Houdyshell Jen Nikolaisen Joanne Caidor Jonathon Acorn Laura Dern Lewis D. Wheeler Lilly Englert Lily Gavin Lily Peterson Lizzie Short Lonnie Farmer Louis Garrel Lucy Austin Maryann Plunkett Mason Alban Meryl Streep Rafael Silva Rosario Guillen Saoirse Ronan Sasha Frolova Sophia Gialloreto Timothée Chalamet Tom Kemp Tony Tucker Tracy Letts
Option 1 drive.google.com 2.04 GB 1080p
Option2mega.nz 2.04 GB 1080p
Option3onedrive.live.com 2.04 GB 1080p
Option4mediafire.com 2.04 GB 1080p
Option5mshare.io 2.04 GB 1080p
Option6usersdrive.com 2.04 GB 1080p
Option7mirrorace.com 2.04 GB 1080p
Snow White and the Huntsman (2012) 2012
Interstellar (2014) 2014
The Karate Kid (2010) 2010
Glass (2019) 2019
Ip Man 4: The Finale (2019) 2019
Pelé: Birth ofaLegend (2016) 2016
The Call of the Wild (2020) 2020
Wonder Wheel (2017) 2017
Talaash (2012) 2012
Fifty Shades Freed (2018) 2018
Rurouni Kenshin: The Legend Ends (2014) 2014
Troy (2004) 2004
Champion (2018) 2018
10,000 BC (2008) 2008
The Outpost (2020) 2020
Me Before You (2016) 2016
Burmese Subtitle © 2021 All rights reserved Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.